Xalka Khilaafka TFG oo Rajo laga Muujiyay
Guddiga madaxa bannaan ee dib u heshiisiinta Qaranka ayaa rajo ka muujiyay xal u helidda khilaafka u dhaxeeya madaxda dowladda.
Guddiga madaxa bannaan ee dib u heshiisiinta qaranka Soomaaliya ayaa rajo ka muujiyay wadahalo laba jeer dhexmaray madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo guddoomiyaha baarlamaanka Shariif Xasan Sheekh Aadan.
Ismaaciil Macalim Muuse, guddoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta ayaa sheegay in ka guddi ahaan ay la kulmeen madaxweynaha iyo baarlamaanka KMGh isla markaana ay u gudbiyeen aragtidooda ku aadan sida loo xalin karo khilaafka siyaasadeed ee ka dhex aloosan.
Waxaan u sheegnay labada ayuu yiri, “In si wadajir ah marxaladan loo wajaho mooyee, cidina keligeed wax ka qaban karin.”
Wuxuu sheegay in ay labada dhinac ka arkeen rabitaan in laysku afgarto wixii ka dhashay khilaafka haatan taagan ee ku saabsan xilliga kala guurka.
Dhinaca kale, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka oo Muqdisho ku shiray ayaa soo dhoweeyay waan waanta laga dhex bilaabay madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka, iyagoo dhinaca ka digay xildhibaano ay sheegeen inaanay ku faraxsaneyn in la xaliyo khilaafka hadda taagan.